🥇 ▷ Rovio wuxuu daabacaa xaashiyaha rasmiga ah ee ugu horeeya ee Transformers Angry Birds Transformers ✅
Rovio wuxuu daabacaa xaashiyaha rasmiga ah ee ugu horeeya ee Transformers Angry Birds Transformers
Hasbro iyo Rovio waxay sii daayeen trailer-hagii ugu horreeyay ee Angry Birds Transformers
Rovio wuxuu ku dhawaaqay bishii Juun ee la soo dhaafay in ay ka shaqeynayaan qayb cusub oo ah Angry Birds iyaga oo kaashanaya Hasbro. Wadashaqeyntaan cusub waxay go’aansadeen mideyso Birds Birds oo leh Transformers oo hada qulqulka rasmiga ah ee ciyaarta koowaad ayaa hada diyaar ah.
Qolka trailer-ka waxaan ku arki karnaa sida Angry Birds ay u qaadato muuqaalka Optimus Prime iyo Bumblebee, in kasta oo aan u qaadanayno in jilayaasha kale ee Isbadalka labada dhinac sidoo kale laga heli doono ciyaarta: sharraxaadda xun xun iyo geesiyaasha, Autobots.
Weli garan mayno nooca ay noqonayso ciyaarta, laakiin by trailer waxaan leenahay aragti ah in ay noqon kartaa tartan aan xadidneyn iyo ciyaarta ciyaarta, in kasta oo ay yihiin uun male-awaal, maaddaama midkoodna Rovio ama Hasbro midkoodna uusan xaqiijinin waxaas.
Autobirds ama Deceptihogs, xaggee ayaad dooran doontaa?
Taariikhda saxda ah ee la bilaabay Baddalaadda Birds Binu-Badda, laakiin annagoo tixgelinayna in trailer-kii ugu horreeyay uu mar hore soo muuqday, uma maleyno inay qaadato waqti aad u dheer oo ay macquul tahay in bilowga deyrta uu yimaado App Store.
Waxyaabaha si fiican uma socdaan Rovio waana u muuqataa taas Xannaanada Badda ee Angry Birds ayaa luntay jalayaasheedii. Munaasabaddan waxay haystaan ​​fursad kale oo cusub oo ay ku muujiyaan in jilayaashu aysan dhiman gebi ahaanba iyo in ay wali guulo waaweyn ku noqon karaan cayaartoyda caadiga ah.
Maxaad u malaynaysaa inuu Rovio ku biiray Hasbro si loo bilaabo qaybtan cusub ee Birry Birds? Ma ciyaari doontaa Transformers Angry Birds? Weli garan mayno, laakiin haddii aad dooran karto, dhinaca aad dooran lahayd: Autobirds ama Deceptihogs? Dhanka kale, ku raaxayso kulankaan rasmiga ah ee ciyaarta ugu horeysa.